कति डच मानिस अझै पनी आफ्नो बिल भुक्तान गर्न सक्छन् कोरोना संकटको समयमा? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	21 मई 2020 मा	• 14 टिप्पणिहरु
यदि तपाइँ मिडियालाई अनुसरण गर्नुहुन्छ भने नेदरल्याण्ड्समा कोरोना भाइरस बाहेक सायद समस्या नै छ, जुन अझै टिक टिक बम जस्तै लुकिरहेको छ। धेरैको ढोका पछाडिको व्यक्तिगत पीडालाई चित्रण गर्ने क्रममा पत्रकारिता कहाँ छ? RIVM आंकडाको विश्लेषण गर्न र दुबै पक्षहरू हाइलाइट गर्न गाह्रो छैन। मुख्यधारको मिडिया रुट्ट एन्ड को को नीति को रक्षा गर्दछ। र जेन्सेन जसले भन्छन कि यो एकदम नराम्रो छैन। यो दीर्घकालीन तालिका के त्यहाँ अर्को पुनरुत्थान हुनेछ जुन पुलिस राज्य पूरा हुनेछ र सबै कुरा र आलोचना गर्ने सबै हटाइनेछ। तर किन कसैले पनि व्यक्तिगत र आर्थिक समस्यामा ध्यान दिदैन?
अभ्यासमा, ती सबै शानदार प्रतिज्ञा गरिएको समर्थन प्याकेजहरू मुख्यतया काउन्टरहरूको प्रश्न हुनेछ, जहाँ तपाईंलाई काउन्टर A बाट काउन्टर बीमा पठाइनेछ। विशेष गरी, 433.000 XNUMX,००० फ्रीलांसरहरू स्पूल हुनेछ, किनभने १ जून देखि उनीहरूको टोजो समर्थन पार्टनरको आयको विरूद्ध जाँच्नेछ र त्यसपछि यो बढि र बढि हो। र यदि तपाईंले समर्थन प्राप्त गर्नुभयो भने, धेरै (गैर-स्वयं-रोजगार व्यक्तिहरू सहित) ले आमन्त्रितमा सानो ड्रप भाँडा तिर्नका लागि विपत्तिजनक हुन सक्छ। सरकारले देख्छ कि यो समस्या लुकिरहेको छ, त्यसैले अस्थायी भाडा फ्रीज सेट गर्ने योजना थियो, तर त्यो भयो Kajsa Ollongren torpedoed।
राजनीतिमा यो कसरी जान्छ: रातो रेखा लामो समयदेखि स्थापित भइसकेको छ, तर तपाईं 'हामी यसको लागि हो' वा 'हामी यसको बिरूद्ध छौं' भन्ने बारेमा केही अभिनय गर्नुहुन्छ। यो हामी अन्तर्गत बाँचिरहेको प्रजातन्त्रको भ्रम हो। ओलोन्ग्रोन भन्छन् भाडा स्टप केवल आवास कर्पोरेसनहरूको लागि हो, किनभने उनीहरूसँग नयाँ निर्माणमा लगानी गर्न कम पैसा छ। “मन्त्रिपरिषद्ले घरधनीलाई अनुकूल समाधान प्रदान गर्ने अवसर दिन रुचाउँछन्। उदाहरणको लागि, तिनीहरूले भाँडादारलाई भुक्तानी स्थगित गर्न सक्छन्, भाँडाको केही अंश रद्द गरे पछि वा भाडा घटाउन सक्छन्, ”काजा भन्छन्। Ollongren अस्थायी रूपमा भाडा कम गर्न सजिलो बनाउन पनि चाहान्छ। एक नयाँ बिल जुन पछि लागू हुन्छ र यसलाई पनि सम्भव बनाउँदछ।
अर्को कानून। कानूनहरू हाम्रो कान वरिपरि उडिरहेका छन्, तर व्यवहारमा यो आवास कर्पोरेसनहरूको लागि भाडा घटाउने छ। र तिनीहरूले सायद यो एकदम उत्सुकताका साथ गर्नेछन् (होईन)।
निस्सन्देह, वास्तविक समस्या भनेको ती मानिससँग हो जुन केवल अधिक पैसा लिन सक्दैन र एक वा दुई महिना पछाडि हुन सक्छ। हामीलाई थाहा छैन किनकि कसैले यसलाई अनुसन्धान गरिरहेको छैन। तपाईं एक राज्यको रूपमा समाजमा पीडितलाई कार्पेट मुनि राख्न चाहनुहुन्छ। भाँडामा कटौती राम्रो छ, तर तपाईं अवरोध संग्रह स agencies्घ एजेन्सीहरू र ब्यालिफहरू विरूद्ध के गर्नुहुन्छ जसले थकित खाताहरूको शीर्षमा विशाल रकम राख्छन्? एक महिनाको भाँडा बकायाले छिटो अतिरिक्त लागतमा सयौं यूरो लिन सक्छ, ताकि तपाईं अर्को महिना पछि पछाडि पस्नुहुनेछ।
त्यसो भए समस्याहरूको चेन प्रतिक्रिया हुन्छ, जहाँ तपाईं यत्ति आर्थिक अडिग हुनुभयो कि यसले युवा हेरचाहलाई पनि निम्त्याउन सक्छ र हेरविचार गर्नुहोस् कि आफ्ना बच्चाहरूलाई पालनपोषण गर्ने परिवारसँग राम्रोसँग राख्न सकीदैन, किनकि तपाईं अब हुनुहुन्न। उनीहरुको ख्याल राख
यदि पैसाको अवमूल्यन (अरबौं युरोको कारण) ले सुपरमार्केटको मूल्यमा असर पार्नेछ र दीर्घकालीन करमा वृद्धि भयो भने किनभने सहायता प्याकेजहरू कतै पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेछ, अझ बढी मानिसहरू समस्यामा पर्नेछन्।
अवश्य पनि त्यहाँ राम्रो मानिसहरु रहेका छन्। यी व्यक्ति हुन् जुन प्रणालीको लागि काम गर्छन् र ती सबै निगरानी र कार्यान्वयन गतिविधिहरू पूरा गर्छन्। सम्भवतः तपाईले एक आरआईभीएम निरीक्षकको रूपमा ठूलो काम पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईंलाई सडकमा मानिसहरूलाई कोरोनाको लागि जाँच्नका लागि पठाइनेछ वा यदि व्यक्ति मिटर साढे आधा टाँसिनुहुन्छ भने। सम्भवत परामर्श फर्महरू छन् जुन हेडे अनुभव गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूले कम्पनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्छन् र उनीहरूलाई डेढ मिटरको समाजमा कसरी कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा सल्लाह दिन्छन्। सरकार, अर्ध-सरकारी वा यससँग सम्बन्धित सेवाहरू प्रदान गर्ने कम्पनीहरूका लागि काम गर्ने जति मानिसहरू, प्रणालीमा अझै काम नगरेका समूहलाई नियन्त्रण र सजाय दिंदा अधिक व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन्।
जब सम्म डचले त्यहाँ पत्ता लगाउँदैन कोही होइन के उनी उद्धार गर्न आउँदैछिन्? प्रणालीको लागि काम गर्ने मानिस लामो समय सम्म आफूलाई ऐनामा आफूलाई गहिरो अप्ठ्यारो महसुस नगरी कसरी हेर्न सक्छन्? ठिक छ, जब सम्म तपाईं बहुमतको हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो सामूहिक winण Meiland संग टाढा वास्तवमा स्वतन्त्र देशको लागि लड्नुको सट्टा जित्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरूले कहिले थाहा पाउनेछन कि हामी एउटा लाटो प्रजातन्त्रमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ धेरै वर्षदेखि राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई छनौटको भ्रममा प्रस्तुत गरेका थिए, तर गोप्य रूपमा जनतालाई पासोमा पार्ने प्रमुख एजेन्डा अनुसरण गर्ने? यस अवस्थाबाट उम्कने एक मात्र तरिका वास्तविक क्रान्ति हो, जहाँ मानिसहरूले शक्ति प्रयोग गर्छन्।
यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र मार्फत गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा जनताले सिधा चुनेका मन्त्रीहरू जनतालाई रिपोर्ट गर्छन्। तिनीहरू बहुमतबाट निर्णय गर्दछन् कि कानून पारित हुन्छ कि हुँदैन, मुख्य नियम यो हो कि कुनै पनि कानूनले संविधानमा आधारभूत अधिकारलाई कमजोर पार्नु हुँदैन वा हटाउनु हुँदैन। त्यसकारण, गोपनीयता र शरीर र सदस्यहरूमा उल्ल .्घन गर्ने सबै कुरा कानूनको रूपमा लागू गर्न सक्नुहुन्न (अनिवार्य खोप लगाईएको कानून पनि होईन)। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सत्तामा आउने राजनीतिलाई वेवास्ता गरेर र नयाँ प्रणाली निर्माण गरेर जनता द्वारा स्थापित गर्न सकिन्छ। सयौं हजारौं लाई यो देखाउनको लागि देखाउनु पर्छ। त्यसकारण हामीले वास्तवमा विद्रोह गर्नुपर्दछ र देखाउनुहोस् कि हामी परिवर्तन चाहन्छौं। तपाईं जे गलत हुन्छ सबैको गुनासो गरेर वास्तविक क्रान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न; तपाईं त्यो गरेर हासिल गर्नुहुन्छ।
त्यसकारण, साँचो क्रान्ति मुक्त गर्न मद्दत गर्नुहोस्। आफैलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा डुबाउनुहोस् र यो वेबसाइट र यसको याचिका साझेदारी गर्नुहोस्: www.fvvd.nl
स्रोत लिङ्क सूची: bnr.nl, telegraaf.nl
ट्याग: कोरोना संकट, कोरोनाभाइरस, विशेष, वित्तीय, भाडा रोक्नुहोस्, भाडा घटाउने, समस्याहरू, सरकार, क्रांति, समर्थन, समर्थन संकुलहरू, tozo, zzp, zzpers
21 मई 2020 मा 10: 25
भर्खरको फेसबुक सेन्सरशिप: तपाईंसँग अझै फलोअरहरू छन्, तर तपाईं अब पोष्ट गर्न सक्नुहुन्न।
यस्तो लाग्छ कि मेरो फेसबुक पेज सकियो: मँ अब केहि पोष्ट गर्न सक्दिन!
21 मई 2020 मा 16: 48
21 मई 2020 मा 12: 02
21 मई 2020 मा 12: 15
21 मई 2020 मा 15: 26
21 मई 2020 मा 19: 52
21 मई 2020 मा 15: 53
22 मई 2020 मा 12: 40
21 मई 2020 मा 12: 45
21 मई 2020 मा 13: 51
21 मई 2020 मा 14: 16
22 मई 2020 मा 00: 40
23 मई 2020 मा 10: 41
23 मई 2020 मा 16: 48
« तपाईं अब भण्डारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं काउन्टरमा तपाईंको नाम र दास नम्बर दिनुहुन्न र यो केवल सुरूवात हो
मौरिस डि होण्डले एक र आधा मिटर नियम बकवास (भिडियो) फेला पार्छ »
कुल भ्रमण: 2.435.154
सेफस op मौरिस डि होण्डले एक र आधा मिटर नियम बकवास (भिडियो) फेला पार्छ